Baiboly pejy 33 - Ny Baiboly
Voalohany < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Manaraka Farany
Eksaody toko 3 (tohiny)
22Samy hangataka fanaka volafotsy sy fanaka volamena ary fitafiana, amin'izay mifanolo-body rindrina aminy sy amin'izay miray trano aminy avy, ny vehivavy, hataonareo amin'ny zanakareo lahy aman-janakareo vavy; ka dia hambabo an'i Ejipta hianareo.
Eksaody toko 4
Moizy irahin'Andriamanitra hamonjy ny zanak'Israely - Miverina any Ejipta izy.
1Fa namaly Moizy ka nanao hoe: Tsy hino ahy izy ireo na hihaino ny feoko akory, fa hanao hoe: Tsy niseho taminao Iaveh. 2Ka hoy Iaveh taminy: Inona iny an-tànanao iny? Dia hoy ny navaliny: Tehina ity. 3Ary hoy Iaveh: Atsipazo amin'ny tany iny. Dia natsipiny tamin'ny tany, ka nanjary bibilava; ka vaky nandositra azy Moizy. 4Fa hoy Iaveh tamin'i Moizy: Arosoy ny tànanao, ka raiso amin'ny rambony. 5Narosony ny tànany dia nandray azy izy ka nanjary tehina indray io teo an-tànany. 6Izany no hinoany fa niseho taminao Iaveh Andriamanitry ny razan'izy ireo, dia ny Andriamanitr'i Jakoba.
Ary hoy koa Iaveh taminy: Atsofohy ao amin'ny tratranao ny tÃ nanao. Dia natsofony tao amin'ny tratrany ny tÃ nany dia notsoahany avy ao, ka indro rakotry ny habokana hoatra ny oram-panala. 7Ary hoy Iaveh: Atsofohy ao amin'ny tratranao indray ny tànanao; ary natsofony tao amin'ny tratrany indray ny tànany, dia notsoahany avy ao, ka indro nanjary sahala amin'ny nofony. 8Raha tsy mino anao izy fa tsy mihaino ny feon'ny famantarana voalohany, dia hino ny feon'ny famantarana faharoa. 9Ary raha tsy mino amin'ireo famantarana roa ireo aza izy, ka tsy mihaino ny feonao, dia haka rano eo amin'ny ony hianao, hanosaka azy amin'ny tany, fa io rano nalainao teo amin'ny ony io hanjary rà eo amin'ny tany.
10Dia hoy Moizy tamin'ny Tompo: Indrisy! ry Tompo, olona mananosarotra ihany aho raha hiteny, ary hatramin'ny omaly sy afak'omaly no toy izany aho, ary na dia hatramin'izao hitenenanao amin'ny mpanomponao izao aza miambatrambatra ny vavako sy ny lelako. 11Fa hoy Iaveh taminy: Iza moa no nanao ny vavan'ny olombelona, ary zovy no mahatonga azy ho moana na marenina, mahiratra na jamba? tsy izaho Iaveh va? 12Koa andeha, fa homba ny vavanao aho ary hanoro izay holazainao. 13Hoy anefa Moizy: Indrisy! ry Tompo, ampitondray izay tianao hampitondraina azy re ny teninao. 14Dia nirehitra tamin'i Moizy ny fahatezeran'ny Tompo, ka hoy izy: Tsy eo va Aarona, rahalahinao, ilay Levita? Fantatro fa tsy hananosarotra izy raha hiteny. Ary indro tamy hitsena anao aza izy, ka ho faly ny fony rahefa mahita anao. 15Hiteny aminy hianao sy hanolotra ny teny hambarany; ary izaho homba ny vavanao sy ny vavany, ary haneho aminareo izay tsy maintsy hataonareo. 16Izy no hiteny amin'ny vahoaka hisolo anao; ho solom-bavanao izy, ary hianao kosa ho solon'Andriamanitra aminy. 17Ary iny tehina iny, dia ento eny an-tànanao, fa iny no hanaovanao ny famantarana.
18Dia lasa Moizy. Nony tafaverina tany amin'i Jetrao rafozany izy, dia hoy izy taminy: Masìna hianao, avelao kely aho hiverina ho any amin'ireo rahalahiko any Ejipta, mba hizaha raha mbola velona ihany izy. Ary hoy Jetrao tamin'i Moizy: Mandehana amim-piadanana.
19Hoy Iaveh tamin'i Moizy, tany amin'ny tany Madiana: Mandehana miverina any Ejipta fa efa maty avokoa ireo nitady hamono aina anao. 20Dia nalain'i Moizy ny vady aman-janany, nampitaingeniny ampondra, ka niverina ho any an-tany Ejipta izy. Nataon'i Moizy an-tanany ny tehin'Andriamanitra. 21Ary hoy Iaveh tamin'i Moizy: Eny am-pandehanana hiverina ho any Ejipta, diniho an-tsaina ireo fahagagana rehetra napetrako eo am-pelatànanao ireo; hataonao eo anatrehan'i Faraona ireo. Fa izaho kosa hanamafy ny fony, ka tsy havelany handeha ny vahoaka. 22Hianao hilaza amin'i Faraona hoe: Izao no lazain'ny Tompo: Israely dia zanako, zanako lahimatoa. 23Ka izao no lazaiko aminao: Avelao handeha ny zanako, hanompo ahy; fa raha mandà hianao ka tsy mamela azy handeha, hovonoiko ny zanakao, dia ny zanakao lahimatoa.
24Teny an-dàlana, teo amin'ny toerana anankiray nandrian'i Moizy, tamy nitsena azy Iaveh, nitady hahafaty azy. 25Fa nalain'i Seforà ny fiharatra vato ka noforany ny zanany lahy, dia nakasiny ny tongotr'i Moizy ny nesoriny teo, nataony hoe: Vady tamin-drà ho ahy hianao. 26Dia tsy naninona azy Iaveh. Tamin'izay no nilazan-dravehivavy hoe: Vady tamin-drà noho ny famorana.
27Ary Iaveh nilaza tamin'i Aarona hoe: Mandehana mitsena an'i Moizy any an'efitra. Dia niainga Aarona, ka nifanena tamin'i Moizy teo an-tendrombohitr'Andriamanitra ary nanoroka azy. 28Nampahalalain'i Moizy an'i Aarona avokoa ny teny nampitondrain'ny Tompo azy, sy ny famantarana rehetra nodidiny hataony. 29Dia notohizan'i Moizy sy Aarona ny diany, ka namory ny loholona rehetra amin'ny zanak'Israely izy. 30Ary nambaran'i Aarona avokoa ny teny nolazain'ny Tompo tamin'i Moizy, sady nataony teo imason'ny vahoaka ny famantarana; 31ka nino ny vahoaka; fantany fa efa namangy ny zanak'Israely Iaveh sy efa nitsinjo ny fahoriany, ka dia niondrika nitsaoka izy ireo.
Eksaody toko 5
Moizy sy Aarona nihaona voalohany tamin'i Faraona.
1Rahefa izany, lasa nankao amin'i Faraona Moizy sy Aarona ka nanao taminy hoe: Izao no lazain'ny Tompo, Andriamanitr'Israely: Alefaso handeha ny vahoakako hanao fety fankalazana ahy, any an'efitra. 2Fa hoy ny navalin'i Faraona: Iza moa Iaveh no hoekeko teny, ka handefasako an'Israely handeha? Izaho tsy mahalala izay Iaveh, ka tsy havelako handeha Israely. 3Dia hoy izy roa lahy: Ny Andriamanitry ny Hebrio no niseho taminay, ka avelao izahay handeha lalan-kateloana any an-efitra, hanolotra sorona amin'ny Tompo, mba tsy hamely anay amin'ny pesta na amin'ny sabatra izy. 4Fa hoy ny mpanjakan'i Ejipta tamin'izy ireo: Nahoana hianareo, ry Moizy sy Aarona, no dia mandrebireby ny vahoaka tsy hanao ny asany? Mandehana mankany amin'ny fanompoanareo. 5Dia hoy Faraona: Indro efa be izao ny vahoaka eto amin'ny tany, ka hotadiavinareo hatsahatra ve ny fanompoany?
6Androtr'izay ihany dia nomen'i Faraona teny ny mpampiasa ny vahoaka sy ny mpanoratra nataony hoe: 7Aza omena mololo hanaovam-biriky toy izay lasa izay intsony ny vahoaka, fa aoka ny tenan'izy ireo no handeha hanangona mololo. 8Nefa ny biriky izay ampanaovinareo azy dia hitovy isa amin'izay nataony teo aloha, tsy hanalanareo na iray aza, fa kamo foana izy, ka izany no imenomenonany hoe: Maniry te-handeha hanao sorona amin'ny Andriamanitray izahay. 9Ka ataovy matin-draharaha izany olona izany, ataovy mikikitra amin'ny asa, ary aoka izy tsy hihaino intsony izao antsanga tsy aman'orana rehetra izao.
10Dia tonga ny mpampiasa ny vahoaka sy ny mpanoratra, ka nilaza tamin'ny vahoaka hoe: Izao no lazain'i Faraona: Tsy hanome mololo anareo intsony aho, 11fa hianareo no mandeha mitady mololo any amin'izay hahitanareo any; ary ny raharaha fanaonareo tsy handatsahana na dia kely aza. 12Dia niely eran'ny tany Ejipta ny vahoaka, hifako bozaka hatao solo-mololo. 13Noporitin'ny mpampiasa nataony hoe: Efao ny asanareo, izay anjara asa voafetra hatao isan'andro tahaka ny fony nanana mololo hianareo. 14Ary voakapoka ny mpanoratry ny zanak'Israely, izay notendren'ny mpampiasan'i Faraona hifehy azy ireo, fa hoy ny mpampiasa: Nahoana hianareo omaly sy androany, no tsy nahavita ny biriky fanaonareo toraky ny taloha? 15Koa lasa nitaraina tany amin'i Faraona ny mpanoratry ny zanak'Israely nanao hoe: Nahoana hianao no dia manao toy izany amin'ny mpanomponao? 16Tsy omena mololo akory ny mpanomponao nefa atao hoe: Manaova biriky, ka indro fa voakapoka ny mpanomponao, ary ny vahoakanao tonga diso amin'izany. 17Fa hoy kosa Faraona: Olona kamo hianareo; olona kamo! Ka izany no ilazanareo hoe: Maniry ta-handeha hanolotra sorona amin'ny Tompo izahay. 18Ka mandehana miasa amin'izao tsy homena mololo hianareo; ary ny isan'ny biriky hatolotrareo dia tsy hovàna akory.
Pejy: Voalohany < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.2424 seconds